कालोबजारी गरेको आरोपमा सेन्ट्रल मललाई २ लाख जरिवाना
कात्तिक २७, विराटनगर । सेन्ट्रल मल विराटनगरलाई कालोबजारी गरेको आरोपमा बुधवार रू. दुई लाख जरिवाना गरिएको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय विराटनगरले अनुगमनको क्रममा खरीद मूल्यभन्दा दोब्बर बढी मुनाफा राखेर सामान विक्री गरेको प्रमाणित भएपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३९ (१) ख बमोजिम उक्त जरिवाना गरिएको कार्यालयका प्रमुख सन्तोष पोखरेलले बताए ।
मलले छूटसहितको बम्पर योजना सर्वसाधारणमा प्रचारप्रसार गरी उपभोक्तालाई भाइमसला (काजु)मा १११ प्रतिशत मुनाफा राखी विक्री वितरणको गरेको थियो । कानूनअनुसार खरीद मूल्यको २० प्रतिशतभन्दा बढी लिएर सामान विक्री गर्नु कालोबजारी र ठगी हो ।
कार्यालयले अनुगमनका क्रममा मलले तिहारमा प्रयोग हुने भाइमसला (काजु) बजारबाट रू. एक हजार १६५ प्रतिकेजी खरीद गरी रू. दुई हजार २५० दरले विक्री वितरण गरेको फेला पारेको थियो । मलले अत्यधिक मुनाफा राखेर काजु विक्री वितरण गरेको भेटेपछि कारवाहीको दायरामा ल्याएको कार्यालय प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए ।
तिहारमा प्रयोग हुने भाइमसलामा चर्को मूल्य लिएर ठगी भइहरहेको जनगुनासो आएपछि बजारमा अनुगमनमा गरेका उनले बताए । मलका व्यवस्थापक गिरिश राठीले थोक बिक्रेताबाट काजु प्रतिकेजी रू. एक हजार ८०० मा खरीद गरेकामा सो अनुसार बिलविजक प्राप्त नभएको बताए । रासस
इलाममा आलुको बीउको हाहाकार, किसान चिन्तित[२०७७ मंसिर, १६]
धनकुटाको सिंभुवामा औद्योगिक ग्राम बन्दै[२०७७ मंसिर, १५]
चिया प्रवर्द्धनमा इलामका स्थानीय तह सक्रिय[२०७७ मंसिर, १५]
प्रदेश १ मा ८६ ओटा अस्पताल शिलान्यास[२०७७ मंसिर, १५]
भोजपुरमा पहिलो पटक लाहा खेतीको शुरुआत[२०७७ मंसिर, १५]
कृषिबीमासम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी : कुल व्यवसायमा ५% कृषिबीमा अनिवार्य
आगामी सातादेखि नेपाल–भारत नियमित उडान
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट खर्च र राजस्व संकलन बढ्यो
स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डविनै पठनपाठन शुरू
बाग्मती नदी बगरमा बेसार खेती